Karelian Bear Inja: incazelo zohlobo, izibuyekezo abanikazi. Puppies Karelian Bear Inja
izinhlobonhlobo eziningi huskies kukhona eyaziwayo nabathandwayo ezweni lethu. Namhlanje niyikhulume uquketheni Karelian Bear Inja, okuyinto ezingavamile eRussia, nakuba kuba bomdabu zohlobo Russian inja. Abanolwazi inja bokudla bayaqiniseka ukuthi lena nenhle kunazo futhi emuhle emndenini yabo inja.
Laika incane ngobukhulu uhlamvu lisebenza futhi bejabule. Eziningana izikhathi amalungu kwalesi silwane kwasala kancane yokuqothulwa, kodwa ngenxa yemizamo abathanda futhi abathandi balezi zilwane, kwakunokwenzeka ukubuyisela izinombolo zabo.
Umlando Karelian Bear Inja waqala maphakathi nekhulu XIX. Kube inja eFinland, lapho kwaba namanje ingxenye yoMbuso Russian. Ngakho-ke, kuze kube manje ngezikhathi ezithile kukhona izingxabano phakathi Finnish futhi Russian inja ochwepheshe we "ubuzwe" lokhu inja.
Ekuqaleni, ochwepheshe Finnish sanquma ukuba sisebenzise lesi inja encane, kodwa esebenzayo kakhulu ukuzingelwa izinyoni. Waze got igama elifanele - inyoni inja. Nokho, abazingeli nge Karelian Bear Inja luveza ukuthi inja akusho yokubhekana nezinselele imisebenzi eyabelwe yona. Kwanqunywa ukuba senze ngcono Ingaphandle ukudala isilwane zokuhlobisa kakhulu.
Ngokuhamba kwesikhathi, uMbuso Russian ngiyaquleka. Finland ithola uzibuse, ekubeni isimo esihlukile. Amazwe ezingafani, futhi insimu Russian inja kwesokunxele. Sekuyisikhathi eside Babehlala Karelia, Leningrad Region. Kufika isikhathi esithile ngabo, lapho kungekho muntu onaka kakhulu kwaze kwaba sekuqaleni XX leminyaka, benza akanandaba le abazingeli Russian. Kwabe sekuvela ukuthi, lena inja encane, okusheshayo futhi beshesha kubonisa imiphumela emihle ukuzingelwa izilwane noboya ezinembewu. Esikhathini Maphakathi nekhulu XX has Soviet inja abaqeqeshi abanesifiso zohlobo Karelian Bear Inja. Waqala ukuzalela hhayi kuphela okuzingela, kodwa futhi ngokubamba iqhaza nemibukiso, njengoba ochwepheshe waphawula idatha yayo evelele zangaphandle.
Noma kunjalo, ngaleyo minyaka, namanje uhlala ezimweni eziningi zabasebenzi ezingaphezu kuka inja zokuhlobisa. Kancane kancane, ukuthandwa lokhu cute isilwane wakhula, kodwa kusukela ngaleso sikhathi zaqala seMpi yoMhlaba yesiBili, futhi inani labantu liphindeke cishe wanyamalala huskies. ososayensi bethu ngokulambisa ephethwe ukulisindisa.
Ekupheleni sixties eSoviet Union waba embukisweni enkulu izinja ukuzingela, esahlanganisa futhi lokhu ubuhle zibomvu. ukuvakasha wokuthoma wakhangiswa umxhwele kakhulu. Abazibonele wakhumbula ukuthi kusukela kulesi sikhathi waqala ukukhula okusheshayo kwayo. Nakuba mangisho ukuthi lokhu kwaba kuphela ezisenyakatho ezweni lethu. Esikhathini naseningizimu nasempumalanga yezwe Karelian Bear Inja asandanga. Ngeshwa, lesi simo ayikashintshi namuhla. Ngokwesibonelo, e Rostov-on-Don a Husky cishe kungenakwenzeka ukuthenga, futhi enyakatho dolobha ukuthenga yethu futhi kokudayiswa Laika Karelian-Finnish akubangi izinkinga. Ngaphezu kwalokho, ukusukela ngeminyaka yoma ekhulwini XX e Leningrad esifundeni ezifuywa lokhu zohlobo, nge ifektri by.
Karelian Bear Inja Ukuhoxiswa Soviet inja ochwepheshe okuzingela upland umdlalo: squirrel, nonogwaja, izingulube zasendle, izinyoni, Martens. Lezi zilwane ingasetshenziswa abazingeli namabhere.
ingqondo Cijela, ukuzinikezela kakhulu idatha yangaphandle nge isikhathi ivunyelwe ukuthi isebenzise lezi izinja njengabangane. Manje kungenziwa igcinwe kumavila amafulethi.
Karelian Bear Inja: incazelo zohlobo
Bayizinja owayemude encane, has a Imizimba kunalokho obukhulu. Isisindo inja 15 kg, nabesifazane mncane - isisindo sabo ingeqi 12 amakhilogramu. Ukukhula besilisa ngesikhathi buyabuna 50 cm, Bitches mayelana ngamasentimitha amahlanu ngezansi.
Isici esibalulekile salo zohlobo Karelian Bear Inja - izinga uvolo. Lapho unokuhlangenwe lokhu elingenamikhono elibomvu, okuyinto has a undercoat awugqinsi, ngcono. Ezicindezelekile elingenamikhono bushelelezi, ubude balo iyunifomu umzimba wonke, ukungabi bikho kokukhanya feathering ngisho encane umsila nasemilenzeni indluzelekazi kubhekwa ngochwepheshe njengoba ukuntuleka idwala, nakuba indinganiso akukuniki lolu daba incazelo ecacile.
umbala - uphawu zinhlobo engadingeki. Okuchaza ukuthi le ncazelo? In the version Russian uboya ejwayelekile ukukhanya ubizwa Fawn njengoba engadingeki. Noma kunjalo, inkulumo ethi "zonke ngenxa yemibala yawo ebomvu ..." Cishe kusho ke. Kodwa kukhona standard ezahlukene, okumele sihambisana Laika Karelian-Finnish. zohlobo izinja (incazelo) zikhona ukuhluka version Russian. Futhi ikakhulukazi kumayelana umbala. Izinga wezizwe Finnish Spitz - igama lesibili zohlobo - abonisa ngokucacile ukuthi izinwele kufanele ababethi brown obomvu noma segolide, mhlawumbe umbala. Mangisho ukuthi umbala obomvu - iyona ikhadi ukubizwa zohlobo.
Ufuna nje ukusho ukuthi Karelian Bear Inja - izinja akuzona Wabasaqalayo ekuhlaleni izilwane. Ziyakwazi zihlakaniphile, kodwa kwesinye isikhathi imvelo nenkani uyaziqhenya futhi ezimele, futhi. Lokhu inja udinga zokuziphatha, fair futhi uhlobo umnikazi eqinile, okuyinto ke uzobe anikelwe umoya wokugcina.
Karelian Bear Inja (ukubuyekezwa abanikazi ukuvumela lesi simangalo) kufanele wakhulela kusukela zisencane. Nokho, uma lokho kuzokwenza zenziwe uchwepheshe noma umnikazi isilwane 'ebona. Kahle inja abafundile uyalalela inkosi yakhe ngaphandle umbuzo, usinikeza isivikelo kahle emdlalweni wakhe wokuqala kanye nempahla yakhe, abe umsizi esisemqoka ukuzingelwa. Kodwa uqaphele ukuthi ukuhlukumeza ingane noma kabi yinja uyaziqhenya tando cha thethelela umuntu, futhi umqeqeshi noma umnikazi.
Ukuqeqeshwa kufanele sigcwaliswe ngokuqinile, kodwa ngenhlonipho. Uma uhlela ukuba zikhule elekeleli ekuzingeleni, puppies Karelian Bear Inja ukuqeqeshwa kusukela zisencane - izinyanga 5. Kufanele ukubhekana abazingeli abanolwazi. Ukuqeqeshwa ngempela kuhlanganisa kokubili ukuthuthukiswa theory lamakhono kanye nomsebenzi emasimini.
Nezingane Karelian Bear Inja kulula yokuthola ulimi olulodwa, kodwa uma ingane yakho incane kakhulu futhi awukwazi ukuqonda ukuthi phambi kwakhe ophilayo, kusukela kwe-inja kufanele kugwenywe. Nalapha futhi, thina ngigcizelele ukuthi bale zohlobo ziyinkimbinkimbi - ukwazana, abazi ukubekezelela yiluphi uhlobo, zikhetha ubuhlobo alinganayo kuphela. Kodwa ingane Laika kungaba umngane omuhle bese waba ngumngane omuhle kakhulu emidlalweni ezinomsindo futhi bejabule.
Okunethezeka elingenamikhono obomvu, wena ukuyichaza ke, kudinga ukunakekelwa okukhethekile. Kuhle Fluffy futhi eside, ngakho ke uma ufuna umngane wakho ezine-ezinemilenze is wabheka njalo okuhle (futhi wonke abanikazi uyayifuna), kuzomele ukuxubha njalo. Kungenjalo uvolo Huskies usongwa. Inja kuyodingeka usike, futhi ijazi elisha utshala eside. ngokuvamile musa ageze isilwane sakho, ukwelashwa ezimbili kuphela ngonyaka. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqapha amazinyo, izindlebe kanye nemilenze besikhumba saleso silwane. Amadlebe kufanele ahlanze njalo (okungenani ukungcoliswa). Laika izinyawo kufanele izinzipho usike, ikakhulukazi uma inja butholakala efulethini.
I-Finnish Spitz ngokuvamile kubonakala tartar. Kulokhu, singase siqale ngendlela isifo sezinsini, okuyinto, kwakuzokwenza kuhilelani ukwelashwa ebizayo yesikhathi eside. Ngakho-ke, kusukela puppyhood accustom inja yakho ukuxubha amazinyo akho, bese le nkinga ngeke zingakuthinti. Kodwa khumbula ukuthi Husky 'ongumuntu "wokuxubha is ngokuphelele contraindicated. Ukusetshenziswa Its kungabangela ecasukile emathunjini. ngamabhulashi akhethekile futhi ayinhlama ngoba izinja edayiswa isilwane ezitolo.
Uma unquma ukuthenga lo mngane zibomvu, kumele wazi ukuthi ungakwazi sithathe umdlwane ezingaphansi kweminyaka engu-ezintathu vo ubudala. Kwenze kangcono nursery eqinisekisiwe. Uma udinga ukuzingela inja ezinhle, qiniseka buza umfuyi izimfanelo abazali ingane ukusebenza. Ideal - ukuthi babe amadiploma zezinyoni nezilwane. Ukukala puppy isilinganiso kangakanani umzimba wakhe ngokulingana. kid Husky ngalesi yobudala kufanele kube kwemisipha, bondlekile, ukuba amathambo eqinile. Elingenamikhono umdlwane enempilo emaningi kakhulu, Fluffy futhi shiny. Akumele babe izindawo amakhanda ayizimpandla, nazo dandruff. Baby amehlo ecacile futhi ihlanzekile, ukuma sifana sikelo bite.
Futhi esinye umbuzo izithakazelo ebalulekile labo sinqume ukuthi beyidinga Karelian Bear Inja - intengo umdlwane. Uma idolobha lakho has a umfuyi yangasese (nokuma okuhle), izindleko inja, cishe, uzoqala ngo-ruble ayizigidi ezingu-30. Intengo ezikhethekile isithumbanja Husky enjalo kuziwa ayizinkulungwane 70. Ngaphambi uya for a puppy, sicela uthintane abanikazi isithumbanja. Bazakunazisa lapho kungcono ukwenza.
Namuhla, abanikazi izinja ezweni lethu impela kancane. Noma kunjalo, iningi labo abathi bajabule kakhulu ukuba amakhosi kwalezi zilwane. Ikakhulukazi eziningi okubuyayo kwesokunxele abazingeli. Bacabanga ukuthi inja enkulu. Karelian Bear Inja siqeqeshelwe kalula, ine kakhulu ukuzingela isazela, lithambe futhi ngikhetha.
A ahlukene iqembu Izibuyekezo kungokwalabo abanikazi aqukethe inja njengoba umngane. Lapha ukubukwa kancane ihlukaniswe. Eziningi zikholelwa ukuthi ekuqaleni isilwane kufanelekile le njongo kahle - ke ngobuqili, ngokwethembeka, ngokucophelela, cishe alupholi, ayinayo iphunga othize. Nokho, kukhona izikhalazo mayelana nemvelo enenkani ezingezwakali wezilwane zabo. Inja uqaphele kakhulu sabantu ongabazi, Nokho, lokho akusho kulesi ubudlova.
Edema yamaphaphu amakati: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Novodevichy Pond eMoscow: incazelo kanjani ukuthola on the esitimeleni
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo Bebecar - Ukubuyekeza
Bump ku indawo obuseduze: Folk uphulukisa